Setting Career Goals by Myanmar Women’s Mentoring Network | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Setting Career Goals by Myanmar Women’s Mentoring Network
Posted on November 25, 2016 by MYEO in Events, Forum, Local, seminar, Workshop //0Comments
Deadline :2nd December 2016
Location :Sule-Shangri La Hotel,Yangon,Myanmar
Time :18:00 P.M – 20:30 P.M
Voluntary Donation :3,000 MMK
The Myanmar Women’s Mentoring Network looks forward to seeing you at the upcoming event!
The theme for this event will be “Setting Career Goals”. As 2016 draws toaclose, people will begin looking ahead to the new year and setting goals for the future. So this seems like an ideal time to think about what career goals we should aim to achieve in 2017 and beyond.
This event will feature mentoring circles, where mentors joinasmall number of protégés to share their knowledge and expertise, answer questions, and create an active dialogue. A voluntary donation of MMK 3,000 will be requested of each participant at the door. Watch their Facebook event page for more information on the event topic as well as updates.
To register for the event and reserveadiscussion table seat, please fill in the following form:
Program information (In Burmese)
Myanmar Women’s Mentoring Network မှ သင့်အား မကြာမီ ကျင်းပသွားမည့် အခမ်းအနား၌ တွေ့ဆုံနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ယခုပွဲအခမ်းအနားတွင် ဆွေးနွေးမည့် အဓိက အကြောင်းအရာမှာ “လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များချမှတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ရန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် နှစ်သစ်အတွက်မျှော်ကြည့်ကာ အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် အသစ်များကို ချမှတ်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှင့် နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေလိုသော လုပ်ငန်း ရည်မှန်းချက်များအကြောင်း တွေးတောရန် အချိန်အခါကောင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
ယခုအခမ်းအနားတွင် အကြံပေးနည်းပြခြင်း အဝန်းအဝိုင်းများ အဖြစ် စီစဉ် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး အကြံပေးလမ်းညွှန်သူများမှ အဖွဲ့ငယ်ကလေးများ ဖွဲ့ကာ ယင်းတို့၏ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများ မျှဝေခြင်း၊ မေးခွန်းများ ဖြေဆိုခြင်းနင့် သွက်လက်တက်ကြွစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူ တစ်ဦးချင်းထံမှ မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၀၀၀ကျပ် စီကို ဝင်ကြေးအလှူငွေ အဖြစ် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနား၏ အဓိက အကြောင်းအရာများနှင့် သတင်းအချက်အလက်သစ်များကို Myanmar Women’s Mentoring Network ရဲ့ Facebook event စာမျက်နှာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အခမ်းအနား တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ထိုင်ခုံနေရာ ရယူထားနိုင်ရန် အောက်ပါ form ပုံစံအား ဖြည့်သွင်းပေးပါ။